प्रकाशित मिति: July 14,2019
२९ असार, आईतवार
उदयपुर– पाँच दिन देखि लगातार भएको बर्षादले उदयपुरको जनजीवनमा समेत ठूलो असर पु¥याएको छ । शनिवार पहिरोले थुनिएको वैद्यनाथ खोला फुटेको छ । उदयपुर गढी गाउँपालिका को वडा नं. ६ दनुवार वेसीमा शनिवार बिहान १० बजे पहिरोले खोला थुनेको थियो । आईतबार विहाने खोला फुटेको छ ।
खोला थुनिदा कुडिया भकुन्डेचौरी, जगरेटार लगाएतका दुई दर्जन भन्दा बढी घरहरु डुवानमा परेको थियो । सो बस्तीहरु अहिले पनि खतरामा छ । थुनिएको पानि कुडिया, भकुण्डे चौरी र जगरेटारसम्म पुगेको थियो । खोला फुटेपछि कटारी नगरपालिकाका गोहिया, बकपति, लामिदुवाली, सोमबारे बजार, रिस्कु, तिनतले, लगाएत कटारी तावा किनारको सुकुम्वासी बस्तीलाई समेत जोखिममा पारेको छ ।
सिराहा र धनुषा क्षेत्रमा कमलानदीले डुवान गरेको क्षेत्रमा हेलिकप्टरद्वारा उद्दार थालिएको छ ।
खोलाले सयौ विघाहा खेतीलाई बगरमा परिणत गरेको छ । धेरै ठाउँहरुमा विजुलीको पोलहरुलाई क्षति हुन पुगदा कटारी क्षेत्रमा विद्युत आउन सकेको छैन ।
मिरचैया देखि कटारी सम्मको सडक खण्डमा पुल निर्माण नहुँदा खहरेहरुले आवत जावतमा समेत समस्या बनाएको छ । खहरेहरुमा बाढी आएको र बाटो बिग्रीएको कारण एम्बुलेन्स तथा यात्रुबाहक बसहरु अलपत्र पर्न गएको छ ।
बर्षादको कारण पहाडी भेगहरुमा पहिरोले धेरै ठाउँमा क्षति पु¥याएको छ । ककरुनदीको परासे स्थितको बाँध भत्कदा सयौ विगाहा खेत बगर हुन पुरेको छ । दुधौलीको सिमराही स्थितको बाँध फुटदा बाढी खेत तर्पm मोडिएको छ । दुई दिन देखि विद्युत अवरुद्द भएकोले सञ्चारका श्रोतहरुबाट स्थानीय बन्चित हुन पुगेको छ ।
बेलका नगरपालिका वडा नं. १ आम्बासीमा बाँध फुटाएर नदी बस्तीमा पसेको छ । नदीले बाँध फुटाएर बस्तीमा पस्दा धेरै घरहरु डुवानमा छ । सप्तकोसीमा आएको बाढीका कारण त्रियुगा नदीको पानीको निकास नहुँदा बेलकाका अम्बासीमा बाँध फुटेर अम्बासी, पुरन्दह, भागलपुर, बेलहा, करैया, चन्द्रपुर लगाएतका गाउँमा बाढी परेको स्थानीयले जनाएको छ ।
फत्तेपुर पुल र चन्द्र नहरको बिचमा बाँध फुटाएर बस्ती पसेको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरले जनाएको छ । करिव २ सय ५० घर भन्दा बढीको उद्दार भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घरहरुमा करिव ७, ७ फिट सम्म पानी जमेको छ । डुवानमा परेकाहरुलाई अन्नपात, खानेकुरा, लत्ताकपडा बगेकोले राहतको लागि नगरपालिका, नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले बाँडने तयारी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्रियुगा नादीले चौदण्डीगढी नगरपालिका ५ बेल्हामा बाँध फुटदा १० घर परिवार अझै सम्पर्क विहिन रहेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयहरुले उद्दारको लागि प्रयास जारी राखेपनि पानीको बहावले समस्या उत्पन्न भएको छ । पिडितहरु घरको छाने र टाँडमाथि रहेको ले उद्दारको पर्खाइमा रहेको छ । धेरैमात्रमा पशु पंक्षि चौपायाहरु बाढीले बगाएको र मानिसहरुको बारेमा जानकारी नभई सकेको स्थानीयहरु बताउँछन । त्यस स्थानमा अधिकांस राई जातिको बस्तिहरेको छ ।
पानीले टेलिकमको टावरमा समस्या हुँदा सम्पर्कमा कठिनाई भएको छ । स्थानीयहरुले उद्दारको लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
यस्तै त्रियुगा नदीको बाँध त्रियुगा नगरपालिका १२ त्रिवेणी टोलमा दुई जनाको घर बाढीले भत्काएको छ । विष्णु मगर र प्रथम डुमको घर बाढीले भत्काएको छ ।
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका वडा नं. १२ बुढिटारमा पहिरोले पुरिएर ३ जना बेपत्ता भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय डकाहले जनाएको छ । प्रहरी घटना स्थल तर्पm जाँदै छ ।
विद्युतीय सेवा अवरुद्ध भएकाले सञ्चारमा समस्या भएको छ । घटना स्थल दुर्गघ भएकोले प्रहरी पुग्नु ५ घण्टा लाग्ने जनाएको छ ।